Sida loo xaliyo google captcha si toos ah ReBreakCaptcha | Laga soo bilaabo Linux
Dagaalka ka dhanka ah bots ee ku soo duulaya boggaga spammy-ka isla markaana iskudaya inuu hareer maro amniga mid kasta oo ka mid ah bogagga shabakadda ayaa muddo dheer sii adkaanayay. Mid ka mid ah aaladaha ugu badan ee loo adeegsado in lagula dagaallamo ku soo xadgudubyadan dhibka badan ayaa ah google captcha, gaar ahaan nooca ReCaptcha V2, pero lamentablemente se ha difundido una vulnerabilidad en esta herramienta que permite resolver las captcha de manera automática.
Qodobka soo socda oo kaliya ayaa ah waxbarasho ayaa noo oggolaan doona inaan ku xadgudubno amniga ReCaptcha V2, iyadoo laga faa’iideysanayo ikhtiyaarka maqalka ee ay bixiso Maqaalka waxaa dhiirrigeliyay gelitaanka soo socda, taas oo u nuglaanta si faahfaahsan loogu sharaxay isla markaana la soo bandhigay qoraal noo ogolaanaya inaan si toos ah ugu xallino captchas.
1 Waa maxay ReBreakCaptcha?
2 Ku rakib oo isku xir ReBreakCaptcha
3 Gabagabo ku saabsan ReBreakCaptcha
Waa maxay ReBreakCaptcha?
Waa codsi bilaash ah oo ka faa'iideysta nuglaanta - ReCaptcha V2, waayo, si toos ah u xalli captcha, adeegsiga maktabadda otomaatiga sayliniyam, ka Aqoonsiga Hadalka Google API iyo algorithms kala duwan.
Qalabku waa mid fudud, maraya saddex waji, kan ugu horreeya ee lagu xallinayo captcha caan ah ee «Anigu ma ihi robot«, Kadib markii captcha la xallinayo soo baxayo, dooro ikhtiyaarka codka, hel codka oo aad ku socodsiiso adiga Aqoonsiga Hadalka Google APIUgu dambeyntiina, geli lambarada lagu aqoonsaday API-ga oo ku gal goobta captcha.
Api Aqoonsiga Hadalka Google ayaa laga yaabaa inuu si isdaba joog ah u fashilmo, sidaa darteed Dib u BreakCaptchaWaxaad isku dayeysaa waxyaabo kale duwan illaa aad ka hesho xalka saxda ah.
Ku rakib oo isku xir ReBreakCaptcha
Si looga faa'iidaysto Dib u BreakCaptcha Waa inaan raacnaa dhowr talaabo oo yar, maadaama qoraalka asalka ah lagu dhajiyay dariiqyada Windows.
Ugu horreyntii waa inaan ku dhejinno ku-tiirsanaanta lagama maarmaanka u ah qoraalka inuu shaqeeyo:
sudo pip rakibi pydub SpeechRecognition selenium
Marka xigta waa inaan iskuxirnaa kaydinta qoraalka:
Waxaan aadeynaa shaashadda saacadda leh oo tafatirka fasalka, oo waddoyinka u dhigma u ah Linux.
Waa inay beddelaan macluumaadka soo socda
# Darawalka Firefox / Gecko ee laxiriira FIREFOX_BIN_PATH = r "C: \_ Faylasha Barnaamijka (x86) \_ Mozilla Firefox \_ firefox.exe" GECKODRIVER_BIN = r "C: \_ geckodriver.exe"
Jidka ku jira Linux
Si la mid ah haddii aad isticmaasho python3, fadlan beddel xrange by range. Waa inaan sidoo kale wax ka bedelno URL-ka halka aan dooneyno inaan ku dabaqno qoraalka (Taasi waa, midka aan dooneyno in Qormada la xaliyo).
Waxaan ku sameyn karnaa xariiqda halka soo socota ay ka muuqato:
Ugu dambayn waa inaan ordi Dib u BreakCaptcha, waxay si otomaatig ah u fureysaa biraawsarka url la tilmaamay oo ay fulineysaa howsha lagu xallinayo captcha-ka su'aasha laga qabo.
Gabagabo ku saabsan ReBreakCaptcha
Qoraalkani wuxuu aasaas u noqon karaa in loo adeegsado habab kala duwan iyo Python oo leh tallaabooyin fudud oo aan ku horumarin karno. Isticmaalka qalabkan waa inuu noqdaa mid loogu adeegsado waxbarashada, iyo bulshada guud ahaan waa muhiim in la faafiyo maadaama ay damaanad qaadayso inaan dhowaan heli doonno balastar xallinaysa u nuglaantaas.
Jilicsanaanta ayaa firfircoon illaa iyo hadda, sidaa darteed waxaa lagula talinayaa dadka isticmaala ee adeegsada ReCaptcha V2 ku buuxiso amnigaaga aalado kale, gaar ahaan baaritaanka IP-ga oo si isdaba joog ah isugu dayaya inuu xalliyo captchas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Sida loo xaliyo google captcha si toos ah ReBreakCaptcha
Waad u adeegsan kartaa maadaama ay ka timid keydka
Waad ku mahadsantahay wadaagistiisa, in kasta oo aad akhrisatay asalka asalka https://east-ee.com/ Uma muuqato in heerka garaacista uu yahay mid cajiib ah, laakiin adeegsadayaal badan ayaa tilmaamaya inay awood u leedahay oo keliya xallinta qabashada ugu fudud ee saamiyadii horeba u hooseeyay.
Runtii, heerarka wax lagu dhufto ayaa hooseeya (Imtixaannada waxaan qaadaa 1 ka mid ah 7dii kasta ee ay xalliyaanba), hase yeeshe, u nuglaanta ayaa jirta oo waxay u badan tahay in qalabku yahay mid la hagaajinayo si saamigaan ku dhacay kor ugu kaco.
Dib u soo kabashada dijo
Waad ku mahadsan tahay maqaalka, runtu waxay tahay inay wax badan ii adeegtay!
Ku jawaab RecoveryPc
walaal wax yar ma sharixi kartaa sida loogu rakibo daaqadaha?
Ku jawaab cristhiam
Waad ku mahadsantahay wadaagista mulaca; Toos ugu qor buundooyinka si aad uhesho waxyar kadib. Maaddaama ay ku jirto Python, waa inaad ka faa'iideysataa.
Salaan qiimo leh iyo mahadnaqa maqaalka, oo ah mid aad u wanaagsan oo xiiso leh. Waxaan jeclaan lahaa inaad fadlan ii soo dirto warqadda daaqadaha, maadaama aanan meelna ka heli karin, aad baad ugu mahadsan tahay waqtigaaga iyo dareenkaaga.
Ku jawaab wilber antonio
Ma xalinayso xarkaha waxayna ii soo diraysaa digniintan
RuntimeW Digniin: Waan heli kari waayey ffmpeg ama avconv - u dhigista ffmpeg, laakiin ma shaqeyn karto
digniin ("Waan heli kari waayey ffmpeg ama avconv - oo u rogaya ffmpeg, laakiin ma shaqeyn karto", RuntimeW Digniin
Ku jawaab carr
xargaha Angelis dijo
Waad salaaman tahay waxaan isku dayaa inaan iska diiwaangeliyo bogga laakiin markaan soo galo MA HELI KARO RECAPTCHA maxaa loola jeedaa tan, qof ayaa i caawin kara
Ku jawaab xadhkaha malaa'igta
ciise ramos dijo
Sida loo xaliyo tirada tirada isku darista, kala-goynta, isku dhufashada
Jawaab ciise ramos
iyo xiriiriyaha soo dejinta?
Waxaan raadinayaa codsi daboolid
Ku jawaab jose fernandez
ana z. buuraha v. dijo
Waxa aan doonayo waa inaan dhaafo ama furo captcha, ma dhaafi karo iyaga, ma fureen
Ku jawaab ana z. buuraha v.
irida quiroz dijo
Waxaan ubaahanahay inaan xaliyo dhibaatada RECAPTCHA mana aqaano sida loo sameeyo, ma i caawin kartaa fadlan
Ku jawaab iraida quiroz
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa GoodByeCaptcha oo fuliya ogaanshaha muuqaalka kaas oo ka fogaanaya dhibaatada Isku day Mar labaad markaad isku daydo inaad xalliso maqalka marar badan.
Ku jawaab MacKey-255